Qolka Keliya ee Darbiga Fiilooday Soosaaraha Tamarta Dhuxul La'aanta
Holtop qaybsan Air qaboojiyey C ...
Saqafka sare Baakadeysan Hawada Xaaladda ...
Hal Qolka Darbiga Ah Oo Loo Kordhiyay Du ...
Airwoods Saqafka Hawada
Joogtee cusboonaysiinta kuleylka iyo isku dheelitirka qoyaanka gudaha
Ka hortag qoyaan badan oo gudaha ah iyo caaryada oo soo baxda
Yaree kharashka kuleylka iyo qaboojiyaha
Ka soo saar hawada qallalan qolka
Isticmaal tamar yar
Dib-u-cusbooneysiiyaha tamarta dhoobada waxtarka leh
Noo soo dir email Bogga PDF Soo Degso
Hawo cusub oo hawo duug ah ka soo saar qolka kolba mid
Si fudud loo rakibo darbiga gudihiisa dhexroorkiisu godkiisu yahay 160-170mm
Dareer otomaatig ah ayaa ka hortagi kara cayayaanka soo galaya iyo hawada qabow ee gadaal u soconaysa marka cutubku istaago
Daboolka dibedda ayaa ka hortagi kara roobka daadanaya iyo shimbiraha oo daaqaya
Taageeraha axial ee la rogi karo oo leh mooto EC ah. Iyadoo la tixraacayo EC-ga la adeegsaday
tikniyoolajiyadda taageeraha waxaa lagu soo qaatay isticmaalka tamarta yar iyo hawlgalka aamusan. Mashiinka marawaxadaha ayaa leh kuleyl isku dhafan
ilaalinta kuleylka badan iyo kubbadaha kubbadda cagta ee nolosha dheer.
Cusbooneysiiyaha Tamarta Dhoobada
Tiknoolajiyadda sare ee tamarta dhoobada dhoobada leh ee dib-u-cusbooneysiinta
waxtarka ilaa 97% wuxuu hubiyaa soosaarida kuleylka hawada soosaarida kululaynta qulqulka hawada. Qaab dhismeedka gacanta awgeed
cusbooneysiiyaha gaarka ah wuxuu leeyahay dusha sare ee xiriirka hawada iyo sare
sifooyinka kuleylka-kuleylka iyo kuleylka.
Dib-u-cusbooneysiiyaha dhoobada waxaa lagu daaweeyaa qayb ka mid ah bakteeriyada taas oo ka hortageysa koritaanka bakteeriyada gudaha dib-u-habeynta tamarta. Waxyaalaha ka hortaga bakteeriyada waxay soconayaan 10 sano.
Labada shaandheyn ee isku dhafan ee isku dhafan oo leh heerka guud ee kala-soocida G3 ayaa bixiya keenista iyo soosaarida miiraha hawada. Miiraha ayaa ka hortagaya in siigada iyo cayayaanka ay ku soo galaan hawada sahayda iyo wasakheynta qaybaha hawo-mareenka. Miirayaasha sidoo kale waxay leeyihiin daaweynta bakteeriyada.
Nadiifinta miiraha waxaa lagu sameeyaa faakiyuum ama biyo dhaqid Xalka jeermiska bakteeriyada lama saaro. F8 filter waa waxaa loo heli karaa iyada oo ah qalab si gaar ah loo dalbaday, laakiin markii la rakibo, waa wuxuu yareynayaa socodka hawada ilaa 40 m³ / h.
Habka hawo qaadista: Hawo-mareenka ayaa ku shaqeynaya soo saarista hawada ama qaabka hawo bixinta oo leh xawaare go'an. Haddii ay dhacdo hawlgal isku mid ah oo ah laba hawo oo isku xiran hal unug wuxuu ku shaqeeyaa qaabka saadka iyo kan kale qaabka soo saarista.Habka cusboonaysiinta:Qalabka hawo qaaduhu wuxuu ku shaqeeyaa laba wareeg, oo midkiiba 65 ilbidhiqsi yahay, si loo siiyo kulayl iyo qoyaan cusbooneysiin.
Hawlgalka dib loo rogi karo ee hawo-dhaqeeyuhu wuxuu awood u siinayaa cusboonaysiinta tamarta wuxuuna ka kooban yahay laba wareeg:
Hawada diiran ee wasakhaysan ayaa laga soosaaray qolka oo inta ay marayso soo cusbooneysiiyaha tamarta dhoobada, dib u soo nooleyaha ayaa nuugaya kuleylka iyo qoyaanka. 65 ilbidhiqsi gudahood, sida dib u cusbooneysiiyaha tamarta loo kululeeyo, hawo-qaadaha ayaa si otomaatig ah ugu wareegaya habka saadka.
Hawada banaanka ee cusub, laakiin qabow waxay dhex maraysaa dib u cusbooneysiiyaha kuleylka waxayna dhuuqayaan kuleylka iyo qoyaanka soo ururay si heerkulka qulqulka hawada uu u xirmo heerkulka qolka. 65 ilbidhiqsi gudahood, marka tamar-kiciyaha tamarta qabowgu yeesho, hawo-qaadaha ayaa u wareegaya habka soo saarista hawada. Wareegu wuxuu bilaabmaa bilowga.
Qalabka hawo-qaadaha ayaa loogu talagalay inuu hubiyo is-weydaarsiga hawada ee farsamada joogtada ah ee guryaha, xafiisyada, hudheelada, kafateeriyada, hoolalka shirarka iyo guryaha kale ee la degan yahay iyo kuwa dadweynaha. Qalabka hawo qaaduhu wuxuu ku qalabeysan yahay kuleyliyaha kuleylka dhoobada kaas oo awood u siinaya keenista hawo sifeeysan oo cusub oo kululeysa iyada oo la adeegsanayo soosaarida kuleylka hawada. Qalabka hawo-mareenka ayaa loogu talagalay inuu ku sii fuulo darbiga oo lagu qiimeeyo hawlgal aan joogsi lahayn. Hawada la raray waa inaysan ku jirin wax isku dhaf ah oo ololi kara ama qarxin kara, uumiga kiimikada, walxaha dhejiska ah, walxaha jilicsan, boodhka daran, danbas iyo walxaha saliida ama jawiga ku habboon sameynta walxaha halista ah (walxaha sunta ah, boodhka, jeermiska cudurada keena).
Hore: Dhamaan Nidaamka Qaboojiyaha Hawada DC Inverter VRF
Xiga: Saqafka-qaboojiyaha Baakadaha Saqafka Sare
Wax soosaarka hawo soo kabashada tamarta
Isweydaarsiga Kuleylka Hawada Cusub
Alaabooyinka Hawo Fresh
Hal Fandhaal Soo-Celiyaha Tamarta Qolka Kali ah
Qalabka Tamarta ee Soo-celinta Darbiga
Wareegtada Hawada Ku Furan
Guryaha hawo soo kabashada ee Tamarta Deegaanka leh Int ...
Single Room Wall Fardoolayda kulaylka Heat Energy R ...
Hawo-qaadashada Tamarta Joogtada ah oo leh HEPA F ...
Qalabka Hawada ee Soo-kabashada Tamarta ee Darbiga leh
Vertical Nooca saar Heat Energy Heat Recovery Ve ...